NANODRONE vCAM, dib u eegis afar-geesoodle ah oo leh kamarad | War gadget
NANODRONE vCAM, waxaan ku tijaabinay afargeesadleyaal kamarad leh
Moodooyin badan oo quadcopters ah ayaa ku jira suuqa, wax ka caawinaya inay u muuqdaan beddelaadyo jaban oo jeebkeena ah sida NANODRONE vCAM, badeecad aad u dhameystiran oo ka farxi doonta kuwa doonaya inay soo galaan adduunkan xakamaynta raadiyaha hawada.
Waxa ugu horreeya ee nagu dhaca ee ku saabsan NANODRONE vCAM markaan ka soo saarno sanduuqiisa waa iyadii cabirka hoos loo dhigay, fadhiista meel bannaan oo keliya 8 x 8 sentimitir. In kasta oo uu aad u yar yahay, haddana afar-geesoodleyaashu waxay naga yaabinayaan ku darista kuwaas oo sida caadiga ah ku badan noocyada waaweyn iyo kuwa qaaliga ah, sida isku-darka kamaradda lagu duubo fiidiyowga kaarka microSD.
Heerka dhismaha, NANODRONE vCAM wuxuu dareemayaa inuu aad ugu adag yahay gacanta. Muuqaalkeedu aad ayuu u fiicanyahay iyada oo loo mahadcelinayo guryaheeda oo leh dhalaal dhalaalaya iyo qurxin muujinaya iftiinka hawada ee diyaaradaha. Mid kasta oo ka mid ah afar matoor waxaa si fiican looga ilaaliyaa garaacista cagaha caagga ah ee sidoo kale ka dhigaya hawsha degitaanku mid jilicsan. Mashiinadani waxay leeyihiin wadar ahaan afar qalab oo si fudud loo saaray iyada oo ay ugu wacan tahay qalab bir ah oo si nabadgelyo leh loogu xoqdo iyada oo aan waxyeello loo geysan, waxtar badanna u leh in si fudud loo beddelo maadaama aad ogtahay, baarayaashu waa qaybaha ugu nugul dhicitaanka iyo garaacista noocan alaabta carruurtu ku ciyaarto ee raadiyaha gacanta ku hayo.
NANODRONE vCAM sidoo kale waxay la socotaa a qolof duulimaad gudaha ah taasi waxay si hufan u hagaajineysaa ilaalinta kiciyaasha. Tani waa soo kordhin aad u xiiso badan oo looga hortagayo kuwa wax kiciya inay si toos ah wax ugu garaacaan walxaha aan ku haysan karno guriga, taasoo duulimaadka ka dhigaysa mid aad u ammaan badan oo ka sii xiiso badan haddii aan rakibno qalabkan, taas oo ay lagama maarmaan u tahay in meesha looga saaro qalabka wax lagu garaaco ka wada hadleen. ka hor. Marka guriga gudihiisa lagu dhejiyo, cabbirka afar-geesoodka ayaa kor u kacaya illaa 13 x 13 sentimitir, laakiin sidaas oo ay tahay, weli wuu garaacayaa sida uu u yar yahay.
Si loo xakameeyo NANODRONE vCAM waxaan leenahay a xarun aad u dhameystiran kaas oo ka shaqeeya 2,4 Ghz band oo adeegsada afar baytariyada AAA. Idaacadan waxay leedahay labo ulood oo aad xasaasi u ah oo lagu xakameeyo dhaqdhaqaaqa kala duwan ee diyaaradaha. In kasta oo usha bidix loo adeegsanayo in lagu jaangooyo dhererka duulimaadka iyo wareegga ku saabsan dhidibka tooska ah ee diyaaradda, usha midig ayaa maamusha dhaqdhaqaaqa horay, gadaal iyo dhinacyada.
Waxaa lagugula talinayaa inaad khibrad yeelato markaad soocelinta ugu horeysa sameyneyso laakiin hadii tani aysan aheyn kiiskayaga, waxaan si adag kugula talinayaa inaad dhigto kiiska duulimaadka gudaha oo aad bilowdid inaad barato dhaqdhaqaaqa kala duwan mid mid. Taasi waa, waxaan marka hore ku celcelinaa wiishka iyo degitaanka, ka dib dhaqaaqa hore ama gadaal, iyo ugu dambeyn dhaqdhaqaaqyada dhinacyada. Haddii aan si tartiib tartiib ah u soconno, qalooca waxbarashaddu aad ayuu u gaabin doonaa waxaan awoodi doonnaa inaan ku bilowno duulimaad dabiici ah, saacaduhu waxay na siinayaan khibrad aan ku qabanno dhaqdhaqaaqyada sii kordhaya.
Mar alla markii aan helno hawsha, waxaan ka faa'iideysan karnaa firfircoonaan weyn oo ay ku faanto NANODRONE vCAM, hadday tahay dardargelinta iyo dhaqdhaqaaqa labadaba. Haddii aan dibadda u duulno, waa inaan tixgelinno xawaaraha dabaysha iyo culeyskeeda oo hooseeya awgeed, kuma haboona in la tijaabiyo haddii dabeylaha 28 km / saacaddii dhaaftay.
Waa in la ogaadaa in haddii sabab kasta ha noqotee NANODRONE vCAM aysan xasilloonayn oo u janjeerto inay si habeysan ugu socoto hal jiho, idaacadda waxay leedahay taxane ah badhannada goo si loo magdhabo dhaqdhaqaaqyadan qasabka ah ee saameynaya maaraynta. Tani waxay badanaa dhacdaa haddii aan leenahay qalab waxyeelleeya oo waxyeelleeya duulimaadka diyaaradda sidaa darteed mahadaas awgeed, waan sixi karnaa dhinacan.
Hadda waa markiisa si loo muujiyo kamaradda ku jirta NANODRONE vCAM. Thanks to qaybtan, waan awoodnaa duubista duullimaadyadayada marka laga eego aragtida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyadoo laga helayo aragtiyo iyo xuruuf cajiib ah. Si loo duubo fiidiyowga waa inaan gelino kaarka microSD dhabarka dambe ee NANODRONE vCAM oo markii la dhammeeyo, ku riix batoon yar dhinacyadeeda midkood. Laga bilaabo waqtigaas, duubista fiidiyowga ayaa bilaabmi doonta waxaana u horseedi doonaa fiidiyowyo 480 x ppm X XUMAY qaraarka.
Tayada Rabbiga fiidiyowyo lagu duubay NANODRONE vCA ToytronicM waa wax aad u fiican marka la fiiriyo cabirka yar ee optics-ka iyo xalka ugu dambeeya. Shaki la'aan, ku daris in lagu xisaabtamo haddii aan xiiseyno oo aan jecel nahay inaan tijaabino.
Iyada oo xulashooyinkaas oo dhan, inbadan oo idinka mid ah waxaad la yaabi doontaan intee in le'eg ayuu batteriga ku sii soconayaa NANODRONE vCAM. Kiiskan, waqtiga duulimaadku waa toddobo daqiiqo ku dhowaad intaas ka dib, waxaan u baahan doonaa inaan ku xirno dekedda USB-ga oo aan sugno 40 daqiiqo si aan u dhammaystirno wareegga lacag-bixinta oo noo oggolaanaysa inaan mar kale duulno waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah. Way cadahay in toddobada daqiiqo ay u muuqdaan inay yar yihiin laakiin waa wax ku badan inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo quadcopters, xitaa in ka sii badan baa la tixgelinayaa isticmaalka kamaradda.
Haddii aad jeceshahay NANODRONE vCAM oo aad rabto inaad naftaada amar ku siiso quadcopter aad u karti badan, waad ku iibsan kartaa kaliya 89,90 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » NANODRONE vCAM, waxaan ku tijaabinay afargeesadleyaal kamarad leh
Wicitaanka Waajibaadka: Dib-u-eegista ololaha Dagaal Horukacsan
Farsamaynta cusub ee 'Windows 10' iyo beddelaaddiisa loo adeegsado